1 USD သို့ NOK ᐈ ပွောငျး $1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ တွင် နော်ဝေ ခရိုဏာ
1 USD သို့ NOK
သငျသညျပြောင်းလဲပါပြီ 1 🇺🇸 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ 🇳🇴 နော်ဝေ ခရိုဏာ. သငျသညျအရှိဆုံးတိကျမှုရလဒ်ပြသနိုင်ဖို့ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအသုံးပြုပါ. ငွေကြေးပြောင်း 1 USD သို့ NOK. ဘယ်လောက်လဲ $1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာ? — kr8.371 NOK.ယင်းကိုကြည့်ပါ ပြောင်းပြန်သင်တန်း NOK သို့ USD.ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည် USD NOK သမိုင်းဆိုင်ရာဇယား, နှင့် USD NOK သမိုင်းဆိုင်ရာမှာ data ငွေလဲနှုန်းကို၏. ကြိုးစားကြဖို့အခမဲ့ခံစားရ ပိုပြီးပြောင်း...
ပွောငျး 1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာ
မှုနှုန်းခြင်းအားဖြင့်: kr8.371 NOK
ပြောင်းပြန်: $0.119 USD
မင်းသိလား? တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, ထိုနေ့၌, ငွေကြေးနှုန်းကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရန် နော်ဝေ ခရိုဏာ ခဲ့: kr10.329. ထိုအချိန်မှစ. ငွေလဲနှုန်းရှိပါတယ် အားဖြင့်ယုတ်လျော့ -1.96 NOK (-18.96%).
50 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာ100 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာ150 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာ200 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာ250 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာ500 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာ1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာ2000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာ4000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာ8000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာ100 Experience Points သို့ SpainCoin1 SpainCoin သို့ Experience Points10 SpainCoin သို့ Experience Points100 Bee Token သို့ ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ်1 Dogecoin သို့ Bogcoin9.0565 Bee Token သို့ ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ်16000 အာမေးနီးယားဒရမ်း သို့ ရုရှ ရူဘယ်1 Vcash သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 ယူရို သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1 Bitcoin Diamond သို့ Dogecoin1 ဆွီဒင် ခရိုဏာ သို့ အီရန်ရီအော်လ်0.01 Multibot သို့ ရုရှ ရူဘယ်700 မြောက်ကိုရီးယား ဝမ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ353 Dogecoin သို့ ထိုင်းဘတ်
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 18 Apr 2021 10:40:02 +0000.